Waxaa soo diyaariyey: Abdi Ali(Abnooor)
Heshiis dhexmaray warabe iyo libaax
Waxaa soo diyaariyey: Abdi Ali (Abnoor)
CIGAAL IYO JIRID
Bari waxaa jirey nin la yidhaahdo Cigaal Shiidaad. Wuxuu ku caanbaxay fulaynimo. Habeen habeenada ka mid ah ayuu guure galay. Wuxuu arkay geed jiridii oo ka muuqata meel ku beegan hortiisa. Cigaal wuxuu u maleeyey Libaax wadada fadhiya oo isaga gaadaya. Gaashaankiisii iyo warankiisii ayuu la diyaar garowbay, oo ku qayliyey, yur-yur, yur-yur. Wallee aniga Libaaxow caawa i ma dagtid geedna iskagama kay dhigtid. Habeenkii oo dhan wuxuu ku jirey feejignaan uu Libaaxa iska eegayo, hase ahaatee markii waagii baryey ayuu wuxuu arkay, wuxuu Libaax u maleynayey oo aan Libaaxba ahayn. Illeen geed jiridii ayuu difaac kula jirey habeenkii oo dhan.
Isaga oo yaaban wuxuu yidhi, "Geed-yahow ma waxaan ku mooday, mise waxaad noqotay, mise waxaan loo noqon doonin. Waxaan ku mooday libaax, waxaadse noqotay Jirid, waxaanse loo noqon doonin guure habeenimo."
Ha noqon fule waxkasta ka baqda.
Waxaa Soo diyaariyey: Abdi Ali
Jiirkii badnaa waxay u digeen saaxiibkood oo ay ku yidhaahdeen, "waar inaga keen meesha Bisadihii waa kuwane." Jiirkii wuu is dhaga tiray oo wuxuu sii watey ciyaartii iyo bood boodkii. Bisadihii ayaa u soo galey isaga oo muraayadii isku daawanaya. Si dhib yar inta ay u qabteen ayey cuneen. Waxayna yidhaahdeen ma maanta ayuu Jiir gurigii noogu soo galey, annaguna duurka ayaan ka raadinaynay wakhti dheer. Jiirkii saaxiibadii talada ka qaadan waayey halkaas ayuu ku dhintay. Maahmaah Soomaliyeed ayaa tidhaa, "talo walaalkii diide, turunturo ma waayo."
Waxaa soo diyaariyey: Abdi Ali.
waxaa goordhow inoo soo socda qormo cusub